You are here: Home Home Madasha Sawirrada
Toddobaadkan waxa marti inoogu ah Madashan Sawirrada muuqaal aanu ka soo qaadannay Feeberweri 1989kii. Waa xaruntii SNM ee Balli-gubadle.
Waa Berked uu lahaa Xasan Cabdi Carwo oo magaalada barigeeda ku taallay. Laba sandaqadood ayaa ku yaallay. Sawirkan waxa la qaaday markii Xarunta SNM loo soo wareejiyay Balli-gubadle. Labada sandaqadood waxa ay ku kala yaalleen bariga iyo woqooyiga. Sandaqaddan aanu hor fadhinaa waa tii woqooyiga oo markii danbena aanu siinnay reerkii lahaa.
Halkan aanu fadhinaa waa xaruntii SNM urur ahaan. Taliskii Ciidammadu bari ayuu naga xigaa, Xaruntii Idaacadduna koonfur oo waxoogaa ayay xuduudda ka tallowsanayd.